कर्णालीमा सिस्नुको चाउचाउ ! – HostKhabar ::
सिस्नुको पनि चाउचाउ? यो प्रश्न सिस्नुको परिकारबारे थाहा नपाएकाहरुका लागि उब्जिनु स्वभाविक हो । पछिल्लो समय नेपालीहरु शहरीया जनजिवन र खानपिनबाट अर्गानिक खानातर्पm मोडिन थालेका छन् । उनीहरु अर्गानिक खाना भन्नासाथ खोजेरै वा धेरै पैसा तिरेरै भएपनि उपभोग गर्न तयार हुन्छन् ।
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा सञ्चालन भएको कर्णाली एक्सपो मा फेला परेको छ धेरैले अचम्म मान्ने सिस्नुको चाउचाउ । त्याहाँको स्टल नम्बर ५७ मा हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकाको सुवर्ण सिमिकोट खाद्य उद्योगले उत्पादन गरेको चाउचाउ बिक्रीमा राखिएको हो ।
कर्णालीका अर्गानिक उत्पादनको बजार अहिले काठमाण्डौं र पोखरामा पाइने गरेको छ ।